Mogadishu Journal » 2018 » September » 12
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo ay kaga qeyb galayaan Shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD. Madaxda dalalka ku mideysan Ururka...
Mjournal :-Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar (Cagjar) ayaa maanta ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Bole ee magaalada Addis Ababa Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayay. Soo dhoweyntan oo aheyd mid heerkeedu sareysay ayaa...
Mjournal :-Waxaa maanta Maxkamadda darajadda koowaad ee Magaalada Qardho la horgeeyay labo eedaysane oo loo haysto inay dileen Marxuum lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan C/laahi Axmed, kaasi oo dhawaan maydkiisa laga helay Wadada u dhexeeysa Magaalooyinka Qardho iyo Garowe. Ragga...
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Safarka Madaxweyne Farmaajo ee Addis Ababa ayaa ku wajahan ka qeyb galka shir madaxeedka Urur Goboleedka IGAD, oo markii u...
Mjournal :-Ciidan isugu jira Soomaali iyo cadaan ayaa xalay saq dhexe waxa ay weerar qorsheysan ka fuliyeen degaanka Mubaarakak ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay Idaacadda Risaala u sheegeen saraakiil ammaanka qaabilsan. Ciidanka cadaanka ah oo ay la socdeen kuwa Bancroft...
Mjournal :-Ciidamada AMISOM ayaa tiro Madaafiic ah ku garaacay Deegaanka Bariirre oo ay maamulaan Dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaafiicda ayaa ku dhacday Saldhigyo Shabaab ay ku leeyihiin Bariirre iyo xaafado dad rayid ah ay degan-yihiin. Ilaa hadda lama oga khasaaraha ka...
Mjournal :-The contribution of Pakistan in the UN peacekeeping mission in Somalia, which marks 25 years this year, should be explored and documented, to promote goodwill on behalf of Pakistan and to draw lessons for further sharpening the idea of peacekeeping. These thoughts came...
Mjournal :-Jamaahiirta kooxda Roma ayaa helay war farxad kaasi oo yimid Ciyaaryahanka garbaha ka ciyaara ee Diego Perotti. Diego perotti ayaa maalmihii lasoo dhaafay yaalay isbitaalka caafimaadka ee naadiga Gillarosi isagoo dhaawac kaga maqnaa kooxdiisa. Kahor kulanka ay...
Mjournal :-Ciidamo ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa waxaa qarax miino lagula eegtay xilli ay ku socdaalayeen degaannada dhaca xuduuda dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Qaraxan oo si gaar ah uga dhacay wadada isku xirta deegaannada Ceelraam iyo Dabaasiti ayaa waxaa la xaqiijiyay...
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno magaalada Jigjiga ayaa waxa ay sheegayaan in xalay bandow lagu soo rogay isu socodka dadweynaha, islamarkaana la hakiyay dhaqdhaqaaqa magaalada. Ciidamo aad u badan ayaa lagu soo daadiyay wadooyinka waa weyn ee magaalada iyo xaafadaha, kuwaasi oo...
Mjournal :-Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta waxa ay kulan ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, sida ay inoo sheegeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay lagu wargeliyay in maanta oo Arbaco...